I-China Towable Boom Lift Umkhiqizi kanye Nomthengisi | I-Daxin
I-towom boom lift ingenye yemikhiqizo yethu eyinhloko. Inokuphakama okuphezulu kokukhuphuka, ibanga elikhulu lokusebenza, nengalo inggoqwa ngaphezu kwezithiyo esibhakabhakeni.Ukuphakama kweMax Platform kungafinyelela ku-16m ngomthamo wama-200kg.
Ibanga losayizi wengxenyekazi: 900mm * 700mm
Amandla ebanga: 200kg
Ububanzi bokuphakama bePlatform: 10m ~ 16m
Isikhathi sewaranti sezinyanga eziyi-12 esinezingxenye zokungcebeleka zamahhala ezitholakalayo
I-Towable Boom Lift uhlobo lwethuluzi lokuphakamisa u-hydraulic elingazungeza i-360 ° ukuphakamisa abahamba ngezinyawo noma izimpahla. Sinezinhlobo eziningana ze- ukuphakamisa ama-boom ongakhetha kuzo. Inkampani yethu ingahlinzeka ngakho konke ukuphakamisa okudonsekayo futhiukuziphakamisa kwe-boom okuzenzela ngokwakho. Imishini yokuphakamisa umfutholuketshezi inezici zokuhamba okulula, ukusebenza okulula, indawo yokusebenza enkulu nokusebenza okuhle kwebhalansi. Ama-trailer booms asetshenziswa kakhulu ezimbonini nasemikhakheni edinga imisebenzi ephakeme kakhulu njengeziteshi, amachweba nezakhiwo zomphakathi. Khetha okokusebenza okudingayo bese uza kimi ukuthola imininingwane eningiliziwe. Ikhwalithi nomsebenzi wethu ngeke ukudumaze.
Q: Ngabe ingalo esongekayo idinga ukuxhunywa ukuze isebenze?
A: Lokhu kusekelwe kuzidingo zakho zokukhetha i-DC noma i-AC, singakunikeza.
Q: Kuthiwani uma ngifuna ukwazi inani elithile?
A: Ungachofoza ngokuqondile "Thumela i-imeyili kithi" ekhasini lomkhiqizo ukusithumela i-imeyili, noma chofoza u- "Xhumana nathi" ukuthola eminye imininingwane yokuxhumana. Sizobona futhi siphendule yonke imibuzo etholwe imininingwane yokuxhumana.
Q: Ingabe umkhiqizo wakho unenkinobho yokumisa okuphuthumayo?
IMP: Imikhiqizo yethu inenkinobho yokuma okuphuthumayo ukuqinisekisa ukuphepha ko-opharetha bethu lapho kwenzeka ugesi noma ezinye izimo eziphuthumayo.
Q: Ingabe amanani akho anenzuzo yokuncintisana?
A: Ifektri yethu yethule imigqa eminingi yokukhiqiza ngokusebenza kahle kokukhiqiza, amazinga ekhwalithi yomkhiqizo, kanye nezindleko zokukhiqiza ezincishisiwe ngezinga elithile, ngakho-ke intengo iyathandeka kakhulu.
Elinye lamakhasimende ethu eSouth Korea lathenga ingalo eyi-trailer esetshenziselwa kakhulu ukunakekela isikhumulo sezindiza nokuhlanza. Ngoba isikhumulo sezindiza sihlala endaweni enkulu uma kuqhathaniswa, bangasebenzisa kalula imoto ukuhudula ingalo esongekayo yokudonsa ukwenza noma yimuphi umsebenzi wokulungisa noma wokuhlanza. Bangakwazi ukuphatha kalula umsebenzi ophakeme kakhulu ngemuva kokuthenga ingalo esongekayo. Ukuphakama kwengalo okulandelanayo kungazungeza ama-360 °, okwenza ibanga lomsebenzi wasemoyeni libe likhulu. Ngale ndlela, asikho isidingo sokushintsha izikhundla kaningi ngenkathi usebenza.
Ikhasimende lethu laseFrance lathenga imishini yethu yokwakha ukuze isetshenziswe emphakathini. Imishini yokwakha ingasebenzela abanikazi emphakathini, ihlanze ingilazi ephezulu, ithenwe izihlahla ezinde noma ilungise imishini ethile ephezulu. Ingalo esongekayo inekhono eliqinile lokunqamula izithiyo endaweni ephakeme kakhulu, futhi kuphephile ukuyisebenzisa endaweni eyinkimbinkimbi yokuhlala. Ipulatifomu yokuphakamisa iqhutshwa uhlelo lwe-hydraulic, ngakho-ke luqinile futhi luphephile, futhi abasebenzi basebenza ngokuzinzile.
Usayizi sekukonke (L * W * H)
Ukusekela Ibanga Lemigqa Ye-Legs (Evundlile)
Ukusekela Ibanga Legs Stride (Kuqondile)
Izinga Lokumelana Nomoya
20 '/ 40' Isitsha Silayisha Ubuningi
40 '/ 2isethi
I-Diesel Power Motor (i-YSD Motor)
Izindlela zamandla eziningi ziyatholakala
Uphethiloli Amandla (Honda Motor)
Amandla kagesi kagesi (Xi'an Motor)
Amandla we-DC-battery (Motor Bucher)
Udizili + Amandla we-AC (Amandla we-Hybrid)
Amandla kagesi + we-AC (Amandla we-Hybrid)
Udizili + DC Power (Amandla we-Hybrid)
Amandla kagesi + DC (Amandla we-Hybrid)
Amandla we-AC + DC (Amandla we-Hybrid)
Ukukhanya kwe-LED kubhasikidi wokusebenza ebusuku (MAHHALA)
Tail Light & Brake Light (MAHHALA)
Ukukhanya Kwexwayiso kuma-4pcs wokusekela okuzenzakalelayo imilenze (MAHHALA)
Amabhuleki Omkhiqizo Wama-ALKO aseJalimane (MAHHALA)
Iphaneli Yokulawula Ubufakazi Yamanzi KuPlatform
Iphaneli Yesilawuli Samanzi Ehluleka Ukuphepha Ehlulekayo
Ibhokisi Likagesi Elingenamanzi, Isikhombi Samandla Ebhethri, Isitobhi Esiphuthumayo
I-YSD Diesel Motor
Udizili / iGesi Motor ifakwe i-accelerator yesandla.
Injini ye-Honda Gasoline (Uyazikhethela)
ISwitzerland Bucher DC Battery Motor (Ngokuzithandela)
Torsion Shaft nomsebenzi omkhulu wokumunca ukushaqeka,
Womoya Rubber Amasondo, Electric Magnetic Brake
I-Two Way Cylinder ene-Balance Valve ne-Emergency Decline switch
Umfutholuketshezi oqondile, akukho ukuvuza kukawoyela ngokuphelele
Intambo Yokulawula ye-4pcs Imilenze Yokusekela eyi-Hydraulic
Umfutholuketshezi Amafutha Tank Filtration Alarm System
2 Windows yokulondolozwa okulula
I-360degree Turn Plate ene-Speed ​​Reducer Technology Motor.
Telescopic Boom for 14m 16m izinhlobo izinhlobo
Idizayini Ekhethekile Ehlanganisiwe
Eqondile Joint Connection / izibopho
Esishelelayo Block of Telescopic Boom
Ibhasikidi elihlala njalo elinesakhiwo se-Anti Pinch Design
Isitebhisi noMnyango wePlatform
Ibhasikidi Lungisa Ukushintsha Ukushintsha
Ukukhiya Kokuphepha Kwebhasikidi Kuvimbela Ukunyakaziswa Lapho Kubhekiswa kubhasikidi.
Isilinda Esincane Ngaphansi Kwebhasikidi Lokugcina Ipulatifomu Iqondile
Ukuphakamisa Nokugcina Ibhalansi Chain
Ukuphepha Ukukhiya Kwengalo Vikela Ukunyakaziswa Lapho Uthela Ukuphakamisa
Inzwa yokutsheka ye-Angle, Ipulatifomu ngeke Iye phezulu / Phansi uma umzimba ungaphezu kwe-4
Shintshela Kunqunyelwe Ukuphepha
I-Siren ingaxhunywa noma inqanyulwe
Intonga yokudonsa engenakulinganiswa
Ukupenda Kokugcoba Okuhle Kakhulu
Izintambo Ezicocekile Namapayipi Omfutholuketshezi
Ukwakheka Kwesakhiwo Okuhlangene Kakhulu Futhi Okuqondile
Ama-4pcs Imilenze Yokuxhasa Umfutholuketshezi enoMsebenzi Wokulungiswa Kwe-engela eguquguqukayo
Amasondo E-Rubber Balance
Isethi ephelele yamanothi esixwayiso
Langaphambilini Indawo yokuhlala yase-China Wheelchair Lift Supplier Residential ngeNtengo Yezomnotho
Olandelayo: Ithebula Eliphakeme Lokuphrinta Isikali
v Hlomisa EJalimane ALKO amabhuleki omkhiqizo anekhwalithi ephezulu
v Hlomisa ISwitzerland IBucher esiteshini futha sha DC
v Hlomisa EJapan I-Honda brand Gas isiteshi futha
v Hlomisa I-China Idumile Isiteshi sepompo yedizili yomkhiqizo we-YSD
v Hlomisa engenamanzi nothuli ibhokisi likagesi.Kulungele ukusebenza ngaphandle.
v Ipaneli yokulawula engenawo amanzil kungenziwa Equipd lapho lina.
v Ukuzilinganisela ukuphela kokusebenza kahle nokuphepha
v Injini kadizili efakazela amanzi, ikhava yemoto nebhethri
v Okomuntu imbobo yokungena yesondlo esivumelana nsuku zonke
v Isicacisi senjini ye-Diesel esisheshayo siguquguquka kalula ukuze sisebenze.
v Amasilinda amabili wendlela anebhalansi ye-valve nomshini wokuncipha ophuthumayo. Ngisho nokudilika kwepayipi le-hydraulic, ipulatifomu ngeke yehle phansi ukuqinisekisa ukuthi iphephe ngokuphelele.
v Kuhlome nge inkinobho yokululama yebhasikidi, yenza ulungiso lwebhasikidi lube lula kakhulu.
v Kuhlome nge Torsion Shaft ngomsebenzi omkhulu wokumunca ukushaqeka, okwenza kube ngcono ukuhamba emgwaqeni.
v Umfutholuketshezi uwoyela filtration alamu, kukukhumbuza ukuthi ushintshe uwoyela wokubacindezela lapho kunokungcola emafutheni.
v Isistimu yokukhiya obhasikidi nengalo igwema ukuzulazula komzimba kwemishini ngesikhathi sokuhamba.
v Kwenziwe umuntu I-LED Izibani zezikhukhula endaweni yesikhulumi yokusebenza
v Ifakwe amalambu amabhuleki axhumene nogandaganda.
v Ifakwe amalambu okuqapha emilenzeni ngayinye.
v Ibhasikidi lesandla sokulwa.
v Ifakwe amahanisi okuphepha ukuvikela opharetha.
v Izithuthi eziqinile ze-Rotary, ukujikeleza okungu-360 °.
v Ukufinyelela okubanzi okuvundlile kusuka ku-5m kuye ku-10.5m ngezingalo ze-telescopic
v Isivinini sokusebenza se-Max 40Km
v Amandla amaningi wokuzikhethela, njenge-AC, DC, AC & DC, Udizili, iGesi njalonjalo.
v Ukunikela MAHHALA izingxenye zokugqoka ezisheshayo zokufaka esikhundleni esisheshayo
Intengo ye-Aerial Boom Lift
Intengo ye-Boom Lift echaziwe
Ukubiza intengo ye-Boom Lift
Ukubiza intengo ye-Boom
Intengo kagesi yokuphakamisa ugesi
Intengo yeKnuckle Boom Lift
Intengo ye-Self Propelled Boom Lift
Intengo Encane Yokuphakamisa
Intengo yeTowable Spider Boom Phakamisa
Inani le-Trailer Boom Phakamisa
I-Self Propelled Telescopic Boom Phakamisa